Jowhar.com : Somali Leader News - News: Isku aadka ciyaaraha Semifinalka Champion League oo lagu dhowaaqay
April 25 2014 07:58:01
Isku aadka ciyaaraha Semifinalka Champion League oo lagu dhowaaqay
Isku aadka kulamada semifinalka Champion league ayaa lagu dhowaaqay iyadoo kooxaha reer Spain aysan kulmi doonin.
Kooxda dooneysa in koobkeedii 10aad ee Champions League Real Madrid ku guuleysato ayaa semi-finalka Champions League waxa ay is arki doonaan kooxda difaacaneysa koobkaan ee Bayern Munich.
Kulankaan ayaana dabcan ah kulanka ugu weyn semi-finalka Champions League iyadoo labadaan kooxood aysan isku cusbeen waxaana ay markii afaraad isku arkayaan semi-finalka. Waxaana ugu danbeysay kulankii ay rigoorayaal ku badisay Bayern Munich ee semi-finalkii 2011-12. Kulanka kale ee xiisaha leh ayaa ah in Atletico Madrid ay lugta hore soo dhaweyn doonto kooxda Chelsea oo koobkaan hanatay 2012, halka Atletico ay ciyaareyso semi-finalkeedii ugu horeysay muddo 40 sanadood ah.
Waxaana kulankaan xiiso ka leh go�aanka Uefa ee goolhaye Courtois iyagoo ku qasbaya Chelsea inay u ogolaato goolhayaha inuu ka horyimaado islamarkaana iska ilowdo heshiiskii lacagta ahaa ee ay la galeen Atletico Madrid. Dhanka kale waxaa semi-finalkaan ka soo bixi kara final ay isagu yimaadaan kooxaha reer Spain Real Madrid iyo Atletico Madrid, ama ku celiska finalkii 2012 ee Bayern Munich iyo Chelsea.
0 Comments · 3631 Reads
Jowhar.com756,060 unique visits